Guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari C/samad Max?ed Gallan oo maanta xilkii la wareegay. – Radio Daljir
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari C/samad Max?ed Gallan oo maanta xilkii la wareegay.
Bossaso, July, 31 – Waxaa maanta xilkii guddoomiayaha gobolka Bari si rasmi ah ula wareegay C/samed Maxamed Gallan oo uu dhawaan xilkaasi u magacaabay M/weyne Faroowe, ka dib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiyihii hore Sh. C/xaafid Cali Yuusuf.
Yuusuf Muumin Bidde oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Bari ahaana siihayaha xilka guddoomiyaha gobolka ayaa xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub, waxaana uu sheegay inuu si diirran u soo dhawaynayo guddoomiyaha.
Md. Gallan guddoomiyaha cusub e gobolka ayaa sheegay inuu guntiga dhiisha isaga dhigi doono si wax uga qabto xaaladda ammaan ee gobolka iyo arimaha kale lagama maarmaanku ah hawshiisa.
Xil wareejinta oo ka dhacday xarunta gobolka ee magaalada Bossaso ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas?uuliyiin kale duwan oo ka tirsan dawladda Puntland iyo odayaasha dhaqanka. Wasiirka amniga ee Puntland Khaliif Ciise Mudan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay si fiican loola shaqeeyo guddoomiyaha cusub si uu hawshiisa u guto.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari waxaa horyaalla arimo culculus oo ay ugu wayn tahay xiqiijinta ammaanka.